ကျွန်မ မလှရင် ဘယ်သူလှမလဲ ဟု ယုံကြည်ရဲဝံ့စွာပြောလာတဲ ဖြူဖြူကျော်သိန်း – မြန်မာနေ့စဉ်သတင်း
ကျွန်မ မလှရင် ဘယ်သူလှမလဲ ဟု ယုံကြည်ရဲဝံ့စွာပြောလာတဲ ဖြူဖြူကျော်သိန်း
လွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ဦးလို သွက်လက်ချက်ချာကာ ယခင်ကထက် ပိုမိုနုပျိုလာသည့်အပြင် ဖက်ရှင်ဘုရင်မတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဖြူဖြူကျော်သိန်းက အချစ်တွေကြောင့် ပိုမိုနုပျို လာခြင်းကြောင့် ကျွန်မ မလှရင် ဘယ်သူလှမလဲ ဟု ယုံကြည်ရဲဝံ့စွာ သူမ၏အချစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားလိုက်သည်။
“အချစ်ကြောင့် နုပျိုလာတယ်ဆိုတာက မှန်တာပေါ့။ ကဲ…ရှင်တို့ ကျွန်မကို မချစ်ကြဘူးလား။ အရင်ကထက်ရော ပိုချစ်မလာကြဘူးလား။ ပရိသတ်တွေကရော၊ မီဒီယာတွေကပါ ဒီလောက်ချစ်နေကြမှတော့ ကျွန်မ စိတ်ချမ်းသာပြီပေါ့ရှင်။ ကဲ….ကျွန်မ မလှရင်ရော ဘယ်သူကလှမှာတဲ့လဲ…ရှင့်ပြောစမ်းပါဦး။ အမလေးရှင်. .ရှင်တို့ ကျွန်မကို ချစ်တာ ၅၂၈ ဆိုပြီး ပြောနေတယ်။ ဂဏန်းတွေနံပါတ်တွေ ပြောနေတာက အတိတ်စိမ်းပေးနေတာလားရှင့်။ ဖြူဖြူရဲ့အရင်တုန်းက ဖက်ရှင်အ၀တ်အစားတွေအရ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝတ်ခဲ့တုန်းက အ၀တ်အစားတွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ့်အ၀တ်အစားက သံချပ်ကာဝတ်မိရဲ့သား ဖြစ်နေတယ်လေ။ အဲဒီတော့ မြှားနတ်မောင်လည်း မပစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ။ ဖြူဖြူ့မှာအချစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောစရာကိုမရှိတာ။ မဖြူရဲ့တူလေးတွေကိုချစ်ဖို့၊ ပရိသတ်ကိုချစ်ဖို့ပဲ စိတ်ထဲရှိနေပါတယ်ရှင်”ဟုပြောသည်။
အဆိုတော်ဖြူဖြူကျော်သိန်းသည် အချစ်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး သိုသိပ်စွာ နေထိုင်တတ်သူဖြစ်သည်ဟု မီဒီယာ အသိုင်း အ၀ိုင်းက မှတ်ချက်ပြုကြပြီး သူမ၏ပရိသတ်များကလည်း အချစ်ရေးကို စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေသူအဖြစ် စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များက သူမထက် ငယ်ရွယ်သည့် အပြင် ယနေ့ခေတ် ဆယ်ကျော်သက် ပျိုမေများ သဲသဲလှုပ်အားပေးခြင်းကို ခံနေရသည့်ကိုရီးယားမင်းသားငယ်ဆန်ဆန် အနုပညာလောကထဲမှ လူငယ်တစ်ဦးနှင့် အချစ်ရေးကိစ္စ အသံထွက်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ငြိမ်သက်သွားခဲ့သည်။
ယင်းအချိန်ကတည်းက စတင်ကာ သူမ၏ မိတ်ကပ်၊ ဆံပင်နှင့် အ၀တ်အစား ဒီဇိုင်းများသည်လည်း လူငယ်တစ်ဦးကဲ့သို့ ပြောင်းလဲသွားခြင်းကြောင့် ပရိသတ်များ၏ ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်း ဝေဖန်မှုများ မြင့်တက်ခဲ့သော်လည်း ၎င်း၏ ပြောင်းလဲလိုက်သည့် အပြင်အဆင်များသည် ပိုမိုလိုက်ဖက်သည်ဟု ပြောဆိုနေကြသည်။
လှတျလပျပေါ့ပါးပွီး ဆယျကြျောသကျမိနျးကလေးတဈဦးလို သှကျလကျခကျြခြာကာ ယခငျကထကျ ပိုမိုနုပြိုလာသညျ့အပွငျ ဖကျရှငျဘုရငျမတဈဦးဖွဈသညျ့ ဖွူဖွူကြျောသိနျးက အခဈြတှကွေောငျ့ ပိုမိုနုပြို လာခွငျးကွောငျ့ ကြှနျမ မလှရငျ ဘယျသူလှမလဲ ဟု ယုံကွညျရဲဝံ့စှာ သူမ၏အခဈြနှငျ့ ပတျသကျပွီး ပွောကွားလိုကျသညျ။
“အခဈြကွောငျ့ နုပြိုလာတယျဆိုတာက မှနျတာပေါ့။ ကဲ…ရှငျတို့ ကြှနျမကို မခဈြကွဘူးလား။ အရငျကထကျရော ပိုခဈြမလာကွဘူးလား။ ပရိသတျတှကေရော၊ မီဒီယာတှကေပါ ဒီလောကျခဈြနကွေမှတော့ ကြှနျမ စိတျခမျြးသာပွီပေါ့ရှငျ။ ကဲ….ကြှနျမ မလှရငျရော ဘယျသူကလှမှာတဲ့လဲ…ရှငျ့ပွောစမျးပါဦး။ အမလေးရှငျ. .ရှငျတို့ ကြှနျမကို ခဈြတာ ၅၂၈ ဆိုပွီး ပွောနတေယျ။ ဂဏနျးတှနေံပါတျတှေ ပွောနတောက အတိတျစိမျးပေးနတောလားရှငျ့။ ဖွူဖွူရဲ့အရငျတုနျးက ဖကျရှငျအဝတျအစားတှအေရ ပွောရမယျဆိုရငျ ကိုယျဝတျခဲ့တုနျးက အဝတျအစားတှကေို ပွနျကွညျ့လိုကျတော့ ကိုယျ့အဝတျအစားက သံခပျြကာဝတျမိရဲ့သား ဖွဈနတေယျလေ။ အဲဒီတော့ မွှားနတျမောငျလညျး မပဈနိုငျဘူးဖွဈနတော။ ဖွူဖွူ့မှာအခဈြနဲ့ ပတျသကျလို့ ပွောစရာကိုမရှိတာ။ မဖွူရဲ့တူလေးတှကေိုခဈြဖို့၊ ပရိသတျကိုခဈြဖို့ပဲ စိတျထဲရှိနပေါတယျရှငျ”ဟုပွောသညျ။
အဆိုတျောဖွူဖွူကြျောသိနျးသညျ အခဈြရေးနှငျ့ပတျသကျပွီး သိုသိပျစှာ နထေိုငျတတျသူဖွဈသညျဟု မီဒီယာ အသိုငျး အဝိုငျးက မှတျခကျြပွုကွပွီး သူမ၏ပရိသတျမြားကလညျး အခဈြရေးကို စိတျဝငျစားမှုမွငျ့တကျနသေူအဖွဈ စိတျဝငျစားခွငျးကိုခံခဲ့ရသညျ။ လှနျခဲ့သညျ့နှဈမြားက သူမထကျ ငယျရှယျသညျ့ အပွငျ ယနခေ့တျေ ဆယျကြျောသကျ ပြိုမမြေား သဲသဲလှုပျအားပေးခွငျးကို ခံနရေသညျ့ကိုရီးယားမငျးသားငယျဆနျဆနျ အနုပညာလောကထဲမှ လူငယျတဈဦးနှငျ့ အခဈြရေးကိစ်စ အသံထှကျခဲ့သျောလညျး နောကျပိုငျးတှငျ ငွိမျသကျသှားခဲ့သညျ။
ယငျးအခြိနျကတညျးက စတငျကာ သူမ၏ မိတျကပျ၊ ဆံပငျနှငျ့ အဝတျအစား ဒီဇိုငျးမြားသညျလညျး လူငယျတဈဦးကဲ့သို့ ပွောငျးလဲသှားခွငျးကွောငျ့ ပရိသတျမြား၏ ကောငျးခွငျး ဆိုးခွငျး ဝဖေနျမှုမြား မွငျ့တကျခဲ့သျောလညျး ၎င်းငျး၏ ပွောငျးလဲလိုကျသညျ့ အပွငျအဆငျမြားသညျ ပိုမိုလိုကျဖကျသညျဟု ပွောဆိုနကွေသညျ။
ပရိတ်သတ်တွေကို မယ်ရီခရစ်စမတ် လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ သားမိသုံးယောက်
အချစ်ကိစ္စမှမဟုတ်ဘူးလေ ဘာမဆို မျှော်လင့်ချက်ထားရင် ပင်ပန်းတယ်ဆိုတဲ့ ရွှေထူး